Mpanamboatra sy mpamatsy vokatra lehibe - Orinasa mpamokatra vokatra lehibe any Sina
Ny arofanina dia ny manaraka ny fenitra AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 ary ny EN1317. Ny fitaovana ampiasaina amin'izany dia ny Q235B (S235Jr ny tanjaky ny vokatra dia mihoatra ny 235Mpa) ary ny Q345B (S355Jr ny tanjaky ny vokatra dia mihoatra ny 345Mpa). Ho an'ny hatevin'ny mpiambina amin'ny alàlan'ny 2.67mm ka hatramin'ny 4.0mm. Ny fitsaboana ambony dia atsoboka ao anaty ala mafana, hanarahana ny AASHTO M232 sy ny fenitra mitovy amin'ny AASHTO M111, EN1461 sns. Ny mpiambina natao hizara ny lalana ho ...
Ny arofanina dia ny manaraka ny fenitra AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 ary ny EN1317. Ny fitaovana ampiasaina amin'izany dia ny Q235B (S235Jr ny tanjaky ny vokatra dia mihoatra ny 235Mpa) ary ny Q345B (S355Jr ny tanjaky ny vokatra dia mihoatra ny 345Mpa). Ho an'ny hatevin'ny mpiambina amin'ny alàlan'ny 2.67mm ka hatramin'ny 4.0mm. Ny fitsaboana ambony dia atsoboka ao anaty ala mafana, hanarahana ny AASHTO M232 sy ny fenitra mitovy amin'ny AASHTO M111, EN1461 sns.
Ny faran'ny terminal dia ny manaraka ny fenitra AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 ary ny EN1317. Ny fitaovana ampiasaina amin'izany dia ny Q235B (S235Jr ny tanjaky ny vokatra dia mihoatra ny 235Mpa) ary ny Q345B (S355Jr ny tanjaky ny vokatra dia mihoatra ny 345Mpa). Ho an'ny hatevin'ny faran'ny terminal dia amin'ny alàlan'ny 2.5mm mankany 4.0mm na manaraka ny fangatahan'ny mpanjifa. Ny fitsaboana ambony dia atsoboka ao anaty ala mafana, hanarahana ny AASHTO M232 sy ny fenitra mitovy amin'ny AASHTO M111, EN1461 sns ny terminal e ...
Ny bolts dia voafaritra ao amin'ny ANSI B1.13M ho an'ny fandeferana amin'ny grady 6 g. Ny fitaovana Bolt dia mifanaraka amin'ny ASTM F568M ho an'ny Kilasy 4.6. Ny fitaovana ho an'ny fehikibo azo atsofoka dia mifanaraka amin'ny ASTM F 568M ho an'ny kilasy 8.83. horonan. Ny fitsaboana amin'ny tany dia manaraka ny AASHTO M232. Ny haben'ny normal ho an'ny mpanasa lamba dia 76 * 44 * 4mm, ary afaka manaraka ny sary avy amin'ny mpanjifa isika. Ho an'ny taratra dia fotsy sy mena ary mavo foana ny loko, azonao afangaro irery izy ireo. Ny bolts sy ny voanjo dia natao hanamafisana ny mpiambina ...